Umbuki zindwendwe okumgangatho wehlabathi
Ikwinqanaba le- 10% ephezulu emhlabeni wonke kumba wobungcali.
Into yokuzonwabisa engasoze ilibaleke
Ikwi- 10% ephezulu emhlabeni wonke kumba wokufikelela kwiindawo ezikhethekileyo.
Kungaya ukuya kutsho kwiindwendwe eziyi- 4 ezineminyaka eyi- 6 nangaphezulu. Abazali basenokuza nabantwana abangaphantsi kweminyaka emi-2.
Aqala kwi-R857 kumntu omnye